မောင်ဖူးဝေ(ထီလာ) – မံမီ | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်ဖူးဝေ(ထီလာ) – မံမီ
ကျုပ် “နှာခေါင်း” တွေက
မပြောတတ်ဘူး လေဗျာ။ ။
၂၄. ၇. ၉၀